Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): June 2012
ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါး တို့တွင်- ကနေဒီ နှင့် ပတ်သက်သော- လူအများသိသင့်သော အချက်အလက် အချို့ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခု ဆောင်းပါးသည်ကား ကနေဒီ၏ ဘ၀ ဖြစ်ရပ်များ နှင့် သူ၏ ဇာတာကို နက္ခတ်ပညာ ရှုထောင့်မှ လေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း ကို ဖေါ်ပြပါမည်။
ကနေဒီ ၏ ဘ၀ဇတ်ကြောင်း အကျဉ်းချုပ်။
၁၉၁၇-ခုနှစ်၊ မေလ-၂၉-ရက်တွင် ဖခင် ဖြစ် ဂျိုးကနေဒီ နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ရို.စ် ဖစ်ဂျရဲလ်ဒ် ကနေဒီ တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ အဘိုးဖြစ်သူ မှာ- အမေရိကန်သို့ ပြောင်းရွှေ.နေထိုင် အခြေချသူ အိုင်းရစ်လူမျိုးဖြစ်ပါသည်။
၁၉၄၀-ဇွန်လတွင်- ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံနှင့် ဘွဲ.ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၄၀-ဇူလိုင်လတွင်- သူအနေဖြင့် တက္ကသိုလ် ကျမ်းပြုခဲ့သော စာတမ်းဖြစ်သည့်- နာဇီ ဂျာမန်များနှင့် ပါတ်သက်၍ ဗြိတိသျှတို့၏ ပျက်ကွက်မှု များကို ရေးထားသည့် “မြူးနစ် မြို.မှ ဖျောင်းဖျစာ (Appeasement in Munich)” စာတမ်းကို “အင်္ဂလန်က ဘာဖြစ်လို့အိပ်မောကျနေခဲ့သလဲ? (Why England Slept)” ခေါင်းစဉ်တပ် ၍ စာအုပ် အနေဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (မှတ်ချက်။ အင်္ဂလန်၏ နာဇီ ဂျာမဏီ နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ရပ်တို့ကို ဝေဘန်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလန် တကယ် အိပ်ပျော်နေသည် ဟုတ်မဟုတ်ကို မူ- နောင်တွင် ဖေါ်ပြမည့် ဟစ်တလာ ဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။)
၁၉၄၁--စက်တင်ဘာလတွင်- အသက် ၂၄-နှစ် ပြည့်ပြီးနောက် အမေရိကန် ရေတပ်သို့ ဒု-အရာခံ ဗိုလ် ဘ၀အဆင့်ဖြင့် ၀င်ရောက် အမှုထမ်းခဲ့သည်။
၁၉၄၃-မတ်လတွင် - အရာခံ ဗိုလ် အဆင့်ဖြင့် PT-109 စစ်သင်္ဘောတွင် အမိန်.ပေး ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၃-သြဂုတ်လတွင် - ဘပိစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတွင်းရှိ မြောက်ပိုင်း ဆော်လမွန် ကျွန်းအနီး ဘလက်ကက် ရေလက်ကြားတွင်- သူ၏ PT-109 သင်္ဘော အား ဂျပန်တို့၏ နှစ်မြုပ် ပစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရချိန်တွင် ကနေဒီသည် မိမိ၏ လက်အောက်ငယ်သား များကို ကယ်တင်နိုင်ရန် သူရဲကောင်းပီသစွာ ရဲရဲရင့်ရင့် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၄-ဇွန်လ ၁၁-ရက်တွင်- ၄င်း၏ သင်္ဘော အပစ်ခတ်ခံရ၍ နစ်မြုပ်စဉ်က ရဲရင့်စွာ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် မှုများအတွက် “Navy and Marine Corps Medal and Purple Heart” ဆုကို ချီးမြှင့် ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၉၄၄-သြဂုတ်လ ၁၂-ရက်တွင်- ကနေဒီ၏ အကိုဖြစ်သူ ဂျိုးကနေဒီ ဂျူနီယာ သည် ၄င်းမောင်းနှင့် ပျံသန်းသော လေတပ် လေယာဉ် စတင်ထွက်ခွာပြီး မကြာခင် မှာပင် ရုတ်တစ်ရက် ပေါက်ကွဲ မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
၁၉၄၅-မတ်လတွင် - ရေတပ်မှ အရာဗိုလ် အဆင့်ဖြင့် ဂုဏ်ရှိစွာ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၆-နိုဝင်ဘာလ-၅-ရက်တွင် -အသက်အားဖြင့် ၂၉-နှစ် အရွယ်တွင်- ဘော်စတွန် မြို. ၁၁-ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် ဒိစတြိတ် အတွက် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၈-နှင့် ၁၉၅၀-တွင်လည်း ထပ်မံရွေးချယ် ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၅၂-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ- ၄-ရက်တွင် မက်ဆာချူဆက် ပြည်နယ် အတွက် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဆိနိတ်တာ အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။ ၁၉၅၈-တွင်လည်း ထပ်မံ ရွေးချယ် ခံရပြန်သည်။
၁၉၅၃-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ- ၃-ရက်တွင် အဲဗလင်း လင်ကွန်း ဆိုသူ အမျိုးသမီး အနေဖြင့် ကနေဒီ၏ ပုဂ္ဂိုလ် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် စတင်အလုပ် လုပ်သည်။
၁၉၅၃-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ- ၁၂-တွင် မဲရီ ဂျက်ကလင်း လီ ဘူဗီယာ နှင့် လက်ထပ်သည်။
၁၉၅၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁-ရက်တွင် - သင်္ဘောမြုပ်စဉ်က ရရှိခဲ့သော နောက်ကျော တွင် ရရှိထားသော ဒဏ်အတွက် ခွဲစိတ်မှု ခံယူခဲ့ရသည်။
၁၉၅၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ လတွင်- ဒုတိယ အကြိမ် နောက်ကျောကို ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရာ၌ သေဆုံးလု နီးပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြန်လည် သက်သာပြီးနောက်- သူရေးသား သော “Profiles in Courage” စာအုပ်သည် ၁၉၅၇-တွင် ပူးလစ်ဇာ ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ (သူ၏ စာပေ အရည်အချင်းကို သိမြင်နိုင်ပါသည်။)
၁၉၅၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ-၁၇-တွင်- ဒုတိယ သမ္မတ ရာထူး အတွက် ဒီမိုကရက် ပါတီမှ ပါတီတွင်း ရွေးချယ်မှု တွင် အရေးနိမ့်ခဲ့သည်။
၁၉၅၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ-၂၃-တွင်- သမီးငယ် ဖြစ်သူ- အဲရာဗယ်လာကို အသက်မပါပဲ မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၅၇-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ-၂၇-တွင်- သမီးငယ် ကဲရိုလင်း ကို နယူးယောက်မြို.တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၆၀၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂-ရက်-တွင် အမေရိကန် သမ္မတ နေရာအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ကြေငြာခဲ့သည်။
၁၉၆၀၊ ဇူလိုင်လ ၁၃-ရက်-တွင် အမေရိကန် သမ္မတ နေရာအတွက်- ဒီမိုကရက်ပါတီကို ကိုယ်စားပြုရန် ပါတီမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၈-ရက်-တွင် ရစ်ချတ် နစ်ဆင်ကို မဲအရေအတွက် အနည်းငယ်မျှဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်- အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ၃၅-ဦးမြောက် သမ္မတ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၅-ရက်-တွင် သားငယ် ဂျွန်ဖက် ကနေဒီ ဂျူနီယာကို မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၆၁၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀-ရက်-တွင် အမေရိကန် သမ္မတ အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
သူ၏ ပထမဦးဆုံး သမ္မတ မိန်.ခွန်းတွင်- “ကျွန်တော် တို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား တွေ .. နိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ကို ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ လို. မမေးပါနဲ.၊ နိုင်ငံ ကို ကျွန်တော်တို့က ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာကို မေးပါ။ ကျွန်တော်ကို ကမ္ဘာသားတွေ အမေရိကန်က ကျွန်တော်တို့ကို ဘာလုပ်ပေးမလဲ လို. မမေးပါနဲ.၊ လူသား တွေ လွတ်လပ်ရေး အတွက် ကျွန်တော် အတူတူ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကို မေးကြပါ.. ” ဟူသော မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၁၊ မတ်လ ၁-ရက်-တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဥပဒေ မူကြမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၁၉၆၁၊ ဧပြီလ ၁၇-ရက်-တွင်- Bay of Pigs invasion ဟု ခေါ်သော ကျူးဘား ခေါင်းဆောင် ဖီဒယ်လ် ကက်စထရိုကို ဖြုတ်ချရန် ကျူးဘားသို့ ကျူးကျော် ခဲ့သော ပြဿနာ ပေါ်ခဲ့သည်။ သမ္မတ အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပြီး ၃-လ အတွင်းတွင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုကိစ္စမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
၁၉၆၂၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂-ရက်နေ့တွင် Rice University ရိုက်စ် တက္ကသိုလ်တွင်- ဒီဆယ်စု နှစ် မကုန်ခင် လ-ပေါ်ကို အမေရိကန်က ခြေချ နိုင်လိမ့်မယ် ဟု ပြောခဲ့သည်။ ပြောခဲ့ပြီး ၇-နှစ် အကြာ ၁၉၆၉-ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်တွင် အာကာသ ယာဉ်မှူး နီးလ် အမ်းစထရောင်းသည် လ-ပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၃-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂-ရက် - သောကြာ နေ့ နေ့လည် ၁၂း၃၀ တွင်- တက္ကဆပ် ပြည်နယ်၊ ဒဲလတ်စ် မြို့၌ ပစ်ခတ် လုပ်ကြံခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ မိနစ် ၈၀-အကြာတွင်- လုပ်ကြံသူဟု မသင်္ကာရသော လီဟာဗီ အော့စ်ဝဲလ်ဒ် Lee Harvey Oswald ကို ဖမ်းဆီး ပြီးနောက်- လူသတ်မှုဖြင့် တရားရုံးတင် ခဲ့သည်။
၁၉၆၃-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄-ရက် - တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် တက္ကဆပ် တွင် ညကလပ် ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်သော ဂျက် ရူဘီ Jack Ruby မှ လီဟာဗီ အော့စ်ဝဲလ်ဒ် အား သတ်ပစ်ခဲ့ပြန်သည်။ ဂျက်ရူဘီ အား သေဒဏ် အမိန့်ချမှတ် ပြီးနောက်- အယူခံ ပြန်ဝင် ထားချိန် တရားရုံး ရက်ချိန်းကို ပြန်လည် သတ်မှတ် နေချိန်- ၁၉၆၇ ဇန်န၀ါရီ ၃-ရက်တွင် နမိုးနီးယား ကြောင့် ဆေးရုံတက် ရပြီးနောက်- သေဆုံးခဲ့သည်။ ဆရာဝန်များ၏ တွေ့ရှိချက် အရ- သူ့တွင် အသည်း၊ အဆုတ် နှင့် ဦးဏှောက် တို့တွင် ကင်ဆာ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ကနေဒီ၏ မွေးချိန်အား စစ်ဆေးခြင်း။
ကျွန်တော့် အနေဖြင့် သုတေသနများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက်- ကမ္ဘာ. နက္ခတ္တ ဝေဒ ပညာရှင်များအတွက်- အချက်များ စုဆောင်းထားပေးသော အချက်အလက် များကို ၀ယ်ယူ စုဆောင်း ခဲ့ရပါသည်။
၄င်းမှ ဖေါ်ပြချက်များအရ Garth Allen ဆိုသူ အနောက်တိုင်း နက္ခတ် ပညာရှင်သည်- ကနေဒီ ၏ မိခင် ပြောသော အချိန် အရ- ညနေ ၃း၀၀ နာရီ ဟု ဖေါ်ပြထားခြင်း၊ အခြားသုတေသီ ဖြစ်သူ Doris Kearns Goodwin ကလည်း "The Fitzgeralds and the Kennedys" တွင် ထိုအချိန်ကိုပင် ဖေါ်ပြထားခြင်းကြောင့် ညနေ ၃း၀၀ ကို များစွာသော အနောက်တိုင်း သုတေသီများက သုံးစွဲကြပါသည်။
အနောက်တိုင်း ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဂျင် လူးဝစ် ဆိုသူက မူ- ပလူတို နှင့် တက္ကဆပ် ဒေသ ဒဲလက်မြို့ တို့ ဆက်စပ်မှုကို သုံးစွဲ၍- ညနေ ၃း၁၇ ဖြစ်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
တဖန်- အနောက်တိုင်း ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သူ- ဒေါရစ် ချာစီ ဒိုယန် မှ ညနေ ၃း၀၀ နာရီ အချိန်သည် မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုကာ- ၄င်းရေးသားသော “အမေရိကန် သမ္မတ များ၏ ဇာတာ” စာအုပ်တွင် ညနေ ၃း၁၅း၂၈ ဖြင့် တွက်ချက် ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
သို့သော် အခြား ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒီ.အိပ်ခ်ျ ရေးသားသော “A Rectification Manual မွေးချိန် ပြန်ညှိခြင်း လက်စွဲကျမ်း” စာအုပ်တွင် ညနေ ၃း၃၉းး၁၅ ဖြင့် ပြန်လည် တွက်ပြခဲ့ပါသည်။
အခြားသော ပညာရှင် တစ်ဦးကလည်း သူ့အနေဖြင့် ညနေ ၃း၁၇းး၃၂ ဟု ပြန်လည် တွက်ပြခဲ့ပြန်ပါသည်။
ကျွန်တော် အနေဖြင့် ကနေဒီ၏ ဇာတာကို နည်းမျိုးစုံ အချိန်မျိုးစုံဖြင့် ရှာဖွေခဲ့ လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် တွက်ချက်ခဲ့သော စစ်ဆေးနည်း အားလုံးကို တင်ပြမည် ဆိုပါက- လွန်စွာ ရှုပ်ထွေးသွားမည် စိုးသဖြင့် အထက်ပါ မွေးချိန်တို့ ထဲမှ အဖြစ်နိုင်ဆုံး မွေးချိန် ရှာဖွေမှု ကိုသာ ရှင်းပြပါမည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ- ဇာတာ တစ်စောင်ကို စစ်ဆေးမည် ဆိုလျှင်- တစ်ချက်ကောင်း၊ နှစ်ချက်ကောင်း မှန်နေယုံမျှ နှင့် ဤမွေးချိန်သည် အမှန်၊ ဤဇာတာသည် အမှန် မဟုတ် နိုင်ကြောင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်ဆန်း ဆောင်းပါး ၊ ဂဠုန် ဦးစော ဆောင်းပါး ၊ စသော များစွာသော ဆောင်းပါးတို့တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။
အချိန် မိနစ် ၂၀-ခန့် ကွာခြားသည်မျှ နှင့်- ဇာတာ တစ်စောင် ဇောက်ထိုး ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွား နိုင်ကြောင်းကို - ကိုပခန်း ကလည်း သူ၏ ဆောင်းပါး ဖြစ်သော “မိနစ် ၂၀ မျှသာ သို့သော် ... ” ဆိုသော ဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူ အနေဖြင့်မူ ကနေဒီ၏ ဇာတာအား ညနေ ၃း၀၅ ဖြင့် တွက်ချက်ယူပါသည်။ ဇာတာရှင် ၏ ဘ၀ ဖြစ်ရပ် အားလုံး ရက်စွဲများ နှင့် တကွ၊ ဘ၀ အနေအထား အားလုံးတို့ နှင့် ကိုက်ညီမှသာ ထိုဇာတာသည် မှန်ကန်သော ဇာတာ ဖြစ်သည်ကို နက္ခတ် ၀ါသနာရှင်များ သတိပြုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
ကနေဒီ၏ မိခင် ပြောပြသော အချိန် ညနေ ၃း၀၀ ဖြင့် ၅-မိနစ် မျှသာ ကွာသော်လည်း- ရက်စွဲများ တိကျစွာ ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ အောက်တွင် ဇာတာခွင် နှင့် တကွ- ထိုဇာတာ အရ - ထပ်မံတွက်ချက် လိုက်သော ဂြိုဟ်အင်အား ဆန်းစစ်မှု အနေအထား အားလုံးကို မြင်တွေ့ကြရပါမည်။
တစ်ဆက်တည်းတွင်- ကနေဒီ၏ ဘ၀ တစ်လျှောက်- ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့် ကြုံဆုံ ခဲ့ရသည်များ နှင့် ဒဿပိုင်ရှင် ဂြိုဟ်တို့၏ အင်အား အချိုးကျ ခွဲပြသော- ကံကြမ္မာ အနေအထားကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အတိုင်း မြင်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဇာတာရှင်သည် ကန် လဂ်- သိဟ် စန်း ဖြစ်သည်။
၁၂-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော-တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ် သည် ရန်ဖြစ်သော ပြိဿ ရာသီ (၉-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် သောကြာ ပိုင်သော ပြိဿ န၀င်း ဖြစ်ကာ-တနင်္လာ ပိုင်သော ရောဟဏီ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 241% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
၁၁-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော-တနင်္လာ ဂြိုဟ် သည် မိတ်ဖြစ်သော သိဟ် ရာသီ (၁၂-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် အင်္ဂါ ပိုင်သော ဗြိစ္ဆာ န၀င်း ဖြစ်ကာ-သောကြာ ပိုင်သော ပြုဗ္ဗဖလဂုဏီ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 138% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
၈-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော-အင်္ဂါ ဂြိုဟ် သည် သခင်၊-ဖြစ်သော မိဿ ရာသီ (၈-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် အင်္ဂါ ပိုင်သော ဗြိစ္ဆာ န၀င်း ဖြစ်ကာ- သောကြာ ပိုင်သော ဘရဏီ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 642% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။ (အလွန့် အလွန် အားကောင်းသော အနေအထား ဖြစ်၏)
၁-တန့် (လဂ်) သခင် ဖြစ်သော-ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် သည် ရန်ဖြစ်သော မိဿ ရာသီ (၈-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် ကြာသပတေး ပိုင်သော ဓနု န၀င်း ဖြစ်ကာ-တနင်္ဂနွေ ပိုင်သော ကြတ္တိကာ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 425% ရှိကာ၊ -90% ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။ 88% ဂြိုဟ်ကောင်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။
၄-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော-ကြာသပတေး ဂြိုဟ် သည် ဥဒါသိမ် ဖြစ်သောပြိဿ ရာသီ (၈-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် စနေ ပိုင်သော မကာရ န၀င်း ဖြစ်ကာ- တနင်္ဂနွေ ပိုင်သော ကြတ္တိကာ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 283% ရှိကာ၊ -64% ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။ 88% ဂြိုဟ်ကောင်း လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်။
၂-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော-သောကြာ ဂြိုဟ် သည် အိမ်ရှင်၊-ဖြစ်သော ပြိဿ ရာသီ (၉-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် တနင်္ဂနွေ ပိုင်သော သိဟ် န၀င်း ဖြစ်ကာ-အင်္ဂါ ပိုင်သော မိဂသီ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 206% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
၆-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော-စနေ ဂြိုဟ် သည် ဥဒါသိမ် ဖြစ်သောကရကဋ် ရာသီ (၁၀-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် တနင်္ဂနွေ ပိုင်သော သိဟ် န၀င်း ဖြစ်ကာ-စနေ ပိုင်သော ဖုသျှ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 59% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
ရာဟု ဂြိုဟ် သည် ဖြစ်သော ဓနု ရာသီ (၄-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူး ပိုင်သော ကန် န၀င်း ဖြစ်ကာ-သောကြာ ပိုင်သော ပြုဗ္ဗာသဠ် နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 191% ရှိကာ၊ ကိတ်မှ အပ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
ကိတ် ဂြိုဟ် သည် ဖြစ်သော မေထုန် ရာသီ (၁၀-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။ န၀င်း စက် အားဖြင့် ကြာသပတေး ပိုင်သော မိန် န၀င်း ဖြစ်ကာ-ရာဟု ပိုင်သော အဒြ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 8% ရှိကာ၊ ရာဟု မှ အပ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။
(ဘွားဇာတာ ရာသီစက် အားဖြင့်) ဘွားဂြိုဟ်များ အချင်းချင်း လွှမ်းမိုးမှု အားဖြင့်-
မူလ အင်္ဂါ ဂြိုဟ် (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) အားမူလ ဗုဒ္ဓဟူး (၁-တန့် (လဂ်) ၏ သခင်) မှ (90.4) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (64.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
မူလ ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် (၁-တန့် (လဂ်) ၏ သခင်) အားမူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-90.4) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (87.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
မူလ ကြာသပတေး ဂြိုဟ် (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) အားမူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-64.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ ဗုဒ္ဓဟူး (၁-တန့် (လဂ်) ၏ သခင်) မှ (87.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
(ဘွားဇာတာ ရာသီစက် အားဖြင့်) ဘွားဂြိုဟ်များ မှ ဘာဝ များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု အားဖြင့်-
၂-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-87.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ မူလ ဗုဒ္ဓဟူး (၁-တန့် (လဂ်) ၏ သခင်) မှ (99.7) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၃-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-87.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ သောကြာ (၂-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (69.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၄-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၆-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ တနလာင်္ (၁၁-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (74.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၈-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (87.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ ဗုဒ္ဓဟူး (၁-တန့် (လဂ်) ၏ သခင်) မှ (99.7) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၉-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ သောကြာ (၂-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (69.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၁၁-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-87.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၁၂-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ တနလာင်္ (၁၁-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (74.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
ဘွားဇာတာအား ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း။
အောင်မြင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသော တနင်္ဂနွေသည်-
အဆင့်မြင့် ပညာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ခရီးသွား လာမှုတို့ကို သရုပ်ဖေါ်သော ၉-တန့် ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များကို ရရှိ နိုင် သူ ဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွင် သာမာန် တွေးခေါ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ၊ လေးနက်သော ဒဿနိက အတွေးအခေါ် သမားဖြစ်တတ်သည်။
ဇာတာရှင်၏ စရိုက်ကို ဖေါ်ပြသော တနင်္ဂနွေသည်- မြေဓါတ်ကို အစိုးရသော ပြိဿ ရာသီတွင် ရပ်တည် နေခြင်းကြောင့်- ဤဇာတာရှင်မျိုးသည် ဘယ်အရာကို လုပ်လုပ်- ဖြေးဖြေး အေးအေးနှင့် သေချာမှ လုပ်တတ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဆိုသော်- ပြိဿ ရာသီ သည် တနင်္ဂနွေနှင့် မတည့်သော သောကြာ ရာသီပိုင် ရာသီဖြစ်သဖြင့် - ဇာတာရှင်၏ အောင်မြင်မှု ထင်ရှားမှုတို့ကို အရှိန် လျော့ကျ စေသော အနေအထား ဖြစ်သည်။ ဤဇာတာရှင် တို့ အနေဖြင့် အလုပ် တစ်ခု ခုကို- လုပ်နေစဉ်သော်လည်းကောင်း၊ လုပ်ပြီးလျှင် သော်လည်းကောင်း နောင်တစ်ခုကို ထပ်လုပ်ရန် စိတ်မကူးပဲ- မိမိလုပ်နေသော ကိစ္စရပ်တွင်သာ စိတ်ရော လူပါ မြုပ်နှံထားတတ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း အများက- ဤဇာတာရှင်အား ခေါင်းမာတတ်သူ ဟု အသိအမှတ် ပြုတတ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် ဤဇာတာရှင်သည် - မိမိလုပ်လိုသည့် ကိစ္စရပ်ကို မရမနေ- ဖြစ်အောင် အချိန်ယူ အကောင်အထည် ဖော်တတ်သူများ ဖြစ်သည်။ ပြိဿ ရာသီသည် နွားသိုးရုပ်ကို သင်္ကေတ ပြုနေသော ရာသီ ဖြစ်သည်။ ထို.ကြောင့် ဤဇာတာရှင် တို့သည် ရံဖန်ရံခါ မထုံတက်သေး- အေးအေး နေတတ်သူများ အသွင် ရှိနေသော်လည်း- အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ရမည် ဆိုလျှင်- ဇွဲလုံ.လ တွင် မည်သူမျှ မယှဉ်နိုင်သော သူမျိုးများ ဖြစ်တတ်သည်။
၁၂-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၉-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ဘ၀တွင် သက်တောင့်သက်သာ စည်းစိမ်ကို ရရှိနိုင်သော အနေအထားလည်း ဖြစ်၏။ ဘာသာရေး လိုက်စားပါက ကောင်းကျိုးများ ထင်ရှားစွာ ရနိုင်သူလည်း ဖြစ်သည်။
မူလ အင်အား အနေဖြင့် 241% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိသော တနင်္ဂနွေသည် - ဇာတာရှင်၏ ဘုန်းတန်းခိုး လွန်စွာ ကြီးစေခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်း တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်၏။
တနင်္ဂနွေ အနေဖြင့်- မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် (သခင်) အဖြစ်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သော ၁၂-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ တနလာင်္ (၁၁-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (74.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊ မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထား တို့သည် တနင်္ဂနွေ အင်အားကြီးရခြင်း၏ အကြောင်းများလည်း ဖြစ်သည်။
တစ်ဖန် တနင်္ဂနွေ ရပ်တည်ရာ- ၉-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ သောကြာ (၂-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (69.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း ကလည်း- စည်းစိမ် ချမ်းသာ နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်း၊ အများ၏ ချစ်ခင်မှု ကို ရနိုင်သော အသွင်အပြင် ကို ဖြစ်စေခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုး ထွန်းတောက်ရခြင်း တို့ ဖြစ်၏။
ရန် ရာသီတွင် တည်သော်လည်း- တနင်္ဂနွေ အင်အားကြီးရသည်များမှာ အထက်ပါ အချက်များကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၂-တန့်ဘာဝ-တွင် ရပ်တည်ခြင်းကြောင့် ပုံမှန် စရိုက် အားဖြင့်- သိုသိုသိပ်သိပ် နေလိုသူ ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဘက်တွင်- ၁၁-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၁၂-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု တို့သည် မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ဆုံးရှုံးရတတ်သည်။ အဆင့်မြင့် မိတ်ဆွေ တို့၏ သစ္စာဖေါက် ခံရခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အနေအထား၊ နောက်ကျော ဓါးနှင့် အထိုးခံရသော အနေအထား လည်း ဖြစ်နေ၏။
ယေဘူယျ အားဖြင့် ဆိုသော်- တနင်္လာသည် မူလ အင်အား အနေဖြင့် 138% ရှိထားပြီး- ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိခြင်း သည်- စန်းကောင်း သည် ဆိုသော- အများ၏ ချစ်ခင်ခြင်းကို ရနိုင်သော အနေအထား ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း- တနင်္လာ ပိုင်ဆိုင်ရာ- ၁၁-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား မူလ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-87.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထား ခြင်းကို တွေ့ရ၏။
ဤအနေအထားသည်- ဇာတာရှင်၏ အောင်မြင် ကြီးပွားမှုအား- ပြင်းထန်သော တိုက်ခိုက်မှု - Violent ခေါ် အကြမ်းဘက်မှု၊ သွေးသံ တို့က ပျက်စီး စေနိုင်သော အနေအထား ဖြစ်နေ၏။
ဤနေရာတွင် ဒုဌာန ခေါ် ၁၂-တန့် တွင် တည်ထားသော တနင်္လာ အနေဖြင့် အင်အား ကောင်းလာရခြင်း တို့တွင်-
တနင်္လာ ရပ်တည်ရာ- ၁၂-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား တနင်္လာကိုယ်တိုင် မှ (74.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊ မူလ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း စသော အနေအထား များကြောင့် ဖြစ်၏။
၈-တန့်ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်းကြောင့် စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ဆောင်တတ်သော၊ သူမျိုး ဖြစ်ရုံမျှ မက- လက်တွေ့ ဆန်းစစ် သုတေသန ပြုနိုင်သော စွမ်းရည်၊ လောကဓံ ကို ခံနိုင်စွမ်း ရှိသူမျိုး ဖြစ်၏။ ၈-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၈-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အလွန်အသက်ရှည်သော အနေအထားကို ရထားသည် ဟု ဆိုနိုင်၏။ သို့သော်- အသက်ရှည်မှု ဟူသည်- ၈-တန့် တစ်ခုတည်းသာ မက- အခြားခြားသော အချက်များစွာ နှင့်ပါ နှိုင်းယှဉ် စစ်ဆေးရခြင်း၊ ရန်သူများသော အနေအထား၊ အင်အားကြီးသော ရန်သူ အနေအထား စသည်တို့နှင့်ပါ ပတ်သက်နေခြင်း တို့ကြောင့်- ဤအချက် တစ်ခုတည်း နှင့် အသက်ရှည် ရမည်ဟု ဆိုလျှင် မှားယွင်း သွားနိုင်သော အနေအထား ဖြစ်၏။
တစ်ဘက်တွင်- အင်္ဂါ အနေဖြင့် ၈-တန့် တွင် တည်ခြင်းသည်- လိင်ကိစ္စ ဆိုင်ရာ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ရပ်၊ အများ၏ ဝေဘန်ခံရ ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရတတ် သော အနေအထား လည်း ဖြစ်၏။ ဤဇာတာတွင် အလွန့်အလွန် ထူးခြားစွာ အင်အားကောင်းသော ဂြိုဟ်မှာ အင်္ဂါ ဖြစ်၏။ ၄င်းအနေဖြင့် မူလတြိဂေါဏ အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သော မိဿ ရာသီ တွင်တည်ခြင်း၊ ၄င်း အနေဖြင့် ကသစ် အိမ်ရှင် အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်သော ဗြိစ္ဆာ န၀င်း တွင်တည်၍၊ သောကြာ ပိုင်သော ဘရဏီ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားပြီး- မူလ အင်အား အနေဖြင့် 642% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိခြင်း တို့သည် လွန်စွာ စွမ်းရည် သတ္တိထူးနှင့် ပြည့်စုံသော- ထက်မြက်သော အနေအထား ကို ပိုင်ဆိုင်ထား၏။
မူလ အင်္ဂါ ဂြိုဟ် အားမူလ လဂ်သခင် ဗုဒ္ဓဟူး မှ (90.4) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊
၄-တန့် ဘာဝ သခင် မူလ ကြာသပတေး မှ (64.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊
၄င်းပိုင် ၈-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ၄င်း အင်္ဂါ ကိုယ်တိုင် မှ (87.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊
၄င်းပိုင် ၈-တန့် အလယ်မှတ်အား- လဂ်သခင် ဗုဒ္ဓဟူး မှ (99.7) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း၊
၄င်းပိုင် ၈-တန့် အလယ်မှတ်အား- ၄-တန့် ဘာဝ သခင် မူလ ကြာသပတေး မှ (91.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း
စသည်တို့သည် အင်္ဂါ အထူး အားကောင်း စေသော အချက်များ ဖြစ်ခြင်း ပင် ဖြစ်တော့၏။ လျှို့ဝှက်ချက်များ နှင့် သက်ဆိုင်သော ၈-တန့် ဘာဝ သခင် အင်အားကောင်းခြင်းသည် လျှို့ဝှက်ချက်များကို မြင်သိနိုင်သော စွမ်းရည် ဖြစ်နေလျှက်- ထို ၈-တန့်၏ သခင်မှာ - မိမိ ၏ ယုံကြည်ချက်ကို ရဲရင့်စွာ လုပ်ဆောင်တတ်သော အင်္ဂါ ဖြစ်နေခြင်းက- မိမိ၏ လက်အောက် ရဲဘော်များကို အသက်စွန့် ကယ်တင်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင် အဖြစ် သူရဲကောင်း ဘွဲ့ရစေခြင်းကိုသာမက- မတရားသော လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖေါ်ထုတ်ရဲသူလည်း ဖြစ်စေတော့သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် သည် အသေးစိတ် ဝေဘန် ပိုင်းခြားနိုင်သော စွမ်းရည် နှင့်- ဆက်သွယ်ရေး၊ နှုတ်ရေး စွမ်းရည်၊ တွက်ချက်မှု စွမ်းရည်ကို ဖေါ်ပြသော ဂြိုဟ် ဖြစ်၏။
၄၂၅% အထိ အင်အားကောင်း ထားသော ဗုဒ္ဓဟူးသည် သူများတကာ နားလည် ရန်ခက်ခဲသော ကိစ္စများ၊ အတွေးအခေါ်သစ်များကို နားလည် သော အရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်ခြင်း၊ ၈-တန့်ခေါ် လျှို့ဝှက်ချက် နှင့် ဆိုင်သော ဘာဝတွင် တည်ခြင်း တို့ကြောင့်- အခြားသူ ဖုံးအုပ်ထားသော လျှို.၀ှက် အတွေးအခေါ်များကို ထိုးဖေါက် မြင်နိုင်သူ ဖြစ်ခြင်း၊ အင်အား ကောင်းသော အင်္ဂါ ပါဝင်သော ဇာတာရှင် ဖြစ်ခြင်း က- စကား စစ်ထိုးခြင်း၊ စကား ပြောကောင်းခြင်း တို့တွင် အလွန်ထူးခြားသူ အဖြစ်ကို ရောက်စေခြင်း ဖြစ်၏။
ကနေဒီသည်- အမေရိကန် သမ္မတများ အနက်တွင် စကားပြော အကောင်းဆုံး သမ္မတ တစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသူ ဖြစ်သည်။ လဂ် သခင် ဖြစ်သော-ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် သည် ရန်ဖြစ်သော မိဿ ရာသီ (၈-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်ခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ပညာသင်စဉ်ကာလ များတွင် နှစ်တိုင်း ပညာရေး အဆင့်ကောင်းမွန်သော အနေအထားကို ရတတ်သည်။ ငယ်စဉ်တွင် ချူခြာတတ်ခြင်း၊ လျှို.၀ှက်သော ပညာများ၊ ကိစ္စရပ်များ တွင် စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ အခြား တစ်ဘက်တွင်- လဂ်သခင် အနေဖြင့်- ရန် ရာသီ၊ ဒုဌာန တွင် ကျရောက် ခြင်းကြောင့်- ကံဆိုးခြင်း သည် ဇာတာရှင် ၏ ဘ၀ သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လာစေခြင်းကို ဖြစ်စေသော အနေအထား ဖြစ်၏။ ထူးခြားသည်က- ထိုဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ်သည် - ကြာသပတေး ပိုင်သော ဓနု န၀င်း ကို စီးနင်းကာ- တနင်္ဂနွေ ပိုင်သော ကြတ္တိကာ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ အသိဥာဏ်၊ ဖျတ်ထိုးဥာဏ် တို့ဖြင့် ထင်ရှားမှု ကို ပြနေသော အနေအထား ဖြစ်၏။
သို့သော်- အထက်တွင် အားကောင်းနေသော အင်္ဂါသည်- သဘာဝ ပါပ ဂြိုဟ် ဖြစ်ရုံမျှ မက- ဒုဌာန သခင်၊ ကာရက ဂြိုဟ်ဆိုးဖြစ်နေခြင်း ကြောင့်- ထိုအင်္ဂါ၏ အနှုတ် အင်အား ၉၀% ဖြင့် လွှမ်းမိုး ထားမှုကို ရရှိနေသော လဂ်သခင် ဗုဒ္ဓဟူး သည် - မူလ အင်အား ကောင်းသော်လည်း- အကြမ်းဘက်မှု (အင်္ဂါ၏ သဘော)၊ နှင့် သေဆုံးခြင်း၊ မရဏ ဘာဝ သခင် ဖြစ်သော အင်္ဂါ ကြောင့်- ကိုယ်ကာယကို ကိုယ်စားပြုသော လဂ်အား ပျက်စီးမှု နှင့် ကြုံရခြင်းကို ဖေါ်ပြနေ၏။ လုပ်ကြံခြင်း ခံရမှုကြောင့်- သွေးထွက်သံယို ဖြင့် သေဆုံးနိုင်သော အနေအထားကို တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်၏။
အခြား တစ်ဘက်တွင်- အင်္ဂါ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး ပူးယှဉ်ခြင်းသည်- အင်ဂျင်နီယာ ပညာ၊ သိပ္ပံပညာကို တတ်မြောက်သူ ဖြစ်ကြောင်း- ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံဘွဲ့ ရစေခြင်းကိုလည်း အကြောင်းပြုထား၏။
၈-တန့်တွင် ရပ်တည်ခြင်းသည်- ရှေးကျမ်းများ အရ နှစ်သက် စရာ သိပ်မကောင်းသော အနေအထား ဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း အခြားတစ်ဘက်မှ ကြည့်ပါက- လျှို.၀ှက်ချက်များကို နားလည် နိုင်စွမ်းရှိသူ စုံထောက် လုပ်ငန်း၊ ရဲလုပ်ငန်းများတွင် လည်း အကျိုးပေးသော ဇာတာရှင်မျိုး ဖြစ်တတ်၏။ ၄-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၈-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ဤဇာတာရှင်များသည် အိမ်ကို သိပ်ခင်တတ် သူများတော့ မဟုတ်တတ်ပေ။ ၄-တန့်သည် Transportaion ကို သရုပ်ဖော်၍ ၈-တန့်သည် ပြင်းထန်သော မတော်တစ်ဆမှု ၊ သေဆုံးမှု ကို ဖော်ပြနေသော ကြောင့် မော်တော်ယာဉ် နှင့် ပတ်သက်သော မတော်တစ်ဆမှုများ၊ သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သော အနေအထားကို ဖေါ်ပြသည်။
ဂျွန်ဖက် ကနေဒီသည်- မော်တော်ကားပေါ်တွင် ပင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုအချက်ကို ထပ်မံ ပံ့ပိုးသော အချက်မှာ- ၄-တန့်ဘာဝ သခင် ကြာသပတေးအား ၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင် အင်္ဂါမှ (-64.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားခြင်း ဖြစ်၏။ ၄-တန့်သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ယာဉ် ကား ခြင်း သွားလာခြင်း ဖြစ်၍- အင်္ဂါသည် သွေးထွက်သံယို၊ အကြမ်းဘက်ခြင်းကို သဘောဆောင်သည်သာမက- မရဏ ဘာဝ ခေါ် သေဆုံးခြင်းကို အစိုးရသော ၈-တန့် သခင်လည်း ဖြစ်နေပါတော့သည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ- ၂၈၃% အထိ အင်အားကောင်းသော ကြာသပတေး၏ အနေအထားသည်- ဘ၀တွင် စည်းစိမ် ချမ်းသာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ နှင့် ဂုဏ် သိက္ခာ မြင့်မားစွာ နေထိုင် ခဲ့ရသော အခြေအနေ ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော အကြောင်း တစ်ချက်လည်း ဖြစ်နေပါ၏။
၉-တန့်ဘာဝတွင် ရပ်တည်ခြင်း ဖြင့်- ခရီးသွားယင်း ဖြင့် ချစ်သူတွေ့တတ်သော ရပ်ဝေးမြေခြား မှ အိမ်ထောင်ဘက် ချစ်သူနှင့် အကြောင်းပါတတ် သော ဇာတာရှင် မျိုးဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် ပညာများ ရခွင့် ကြုံတတ်သော ဇာတာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အလှအပ ကို နှစ်သက် ခံစားတတ်သော အနေအထားလည်း ရှိ၏။ ၂-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်သည် ၉-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် အဆင့်မြင့် အတတ်ပညာ၊ အသိပညာ များကို ရနိုင်သော ဇာတာရှင် ဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ် ပညာပေး လုပ်ငန်း များတွင် အားသန်မှု ရှိသူဟု ဆိုနိုင်သည်။ အလွန်အင်အားကောင်း မူလ အင်အား အနေဖြင့် 206% ရှိကာ၊ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိသဖြင့်- စည်းစိမ် ချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံသော ဘ၀တွင် ရပ်တည် ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ၏။
၁၀-တန့်ဘာဝတွင် တည်နေခြင်း ဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ လေးလေးနက်နက် လုပ်တတ်သည်။ အထူးဖြင့် သိပ္ပံ၊ သုတေသနများ တွင် အလွန်သင့်တော်၍ လေးလေးနက်နက် စူးစူးစိုက်စိုက် အလုပ်မျိူး ကို လုပ်ပါက ဇာတာရှင်သည် အလွန်အောင်မြင်သော သူဖြစ်မည်ကို ဖေါ်ပြနေသည်။
တစ်ဆက်တည်းတွင်- ၆-တန့်ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် အနေဖြင့် စနေ သည် ၁၀-တန့်တွင် တည်ခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အပြိုင် အဆိုင် ကိစ္စများတွင် အောင်မြင်မှုများ ရတတ်သည်။ အမွေပစ္စည်းတို့ကြောင့် အမှုအခင်းများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်တတ်ပြီး၊ တစ်ဘက်ရန်သူကို မလှုပ်နိုင်အောင် ထိန်းထားနိုင်စွမ်း ရှိသူများ ဖြစ်တတ်သည်။ မိမိ၏ အစွမ်းဖြင့် တန်ခိုးအာဏာကို တည်ဆောက်နိုင်သူမျိုး ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် စနေဂြိုဟ်သည် အင်အား အနေဖြင့် ၅၉% မျှသာ ရှိနေသောကြောင့်- အသက်ရှည်နိုင်မှုကို အထောက်အကူ ကောင်းစွာ မပြုနိုင်ခဲ့ပါချေ။
ဘရိဂု သျှတ္တရ ကျမ်း ၉-၁၀ အရ၊ ရာဟု သို့မဟုတ် ကိတ်သည် ဇာတာ၏ ၄-တန့်တွင် တည်ပါက-ဇာတာရှင် တွင် အလှအပ ဇိမ်ခံ ပစ္စည်းတို့ပေါများပြီး- အိမ်ထောင်ဘက် နှစ်ယောက် ရှိတတ်၏ ဟု ဆိုထားပါ၏။ ရာဟုသို့မဟုတ် ကိတ်သည် ပါပဂြိုဟ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော် မိခင်သည် စိတ်ဆင်းရဲရတတ်၏။ (သားသမီးများ- ရာထူး ကြီးမားသော်လည်း- တစ်ယောက်ထက်မက- လုပ်ကြံခြင်း ခံရသော မိခင် အနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲမှုများ ရှိနိုင်ခြင်းကို ဆင်ခြင်နိုင်၏။) သို့သော်လည်း သောမဂြိုဟ်များနှင့် ဆက်စပ်ပါက ထိုအဆိုးတရား တို.ကို ပယ်ဖျက်၏။ ဖလဒီပက အဆိုအရမူ- ရာဟုသည် ၄-တန့်တွင် တည်လျှင်- ဇာတာရှင်သည် ရူးရူးမိုက်မိုက် လုပ်တတ်၏၊ ဒုက္ခပေးတတ်၏။ အသက်တိုပြီး၊ ပျော်ရွှင်မှု ရရန် ခက်ခဲ၏။ သမဂ္ဂါ စိန္တာမဏိကျမ်း အလိုအရ-၄-တန့်တွင် တည်သော ရာဟု ဖြစ်ပြီး- န၀င်း စက် အားဖြင့် လဂ်သခင် ဗုဒ္ဓဟူး ပိုင်သော ကန် န၀င်း ဖြစ်ကာ-၂-တန့် သခင်- သောကြာ ပိုင်သော ပြုဗ္ဗာသဠ် နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 191% ရှိကာ၊ ကိတ်မှ အပ ဂြိုဟ်ဆိုး လွှမ်းမိုးမှု မရှိပါ။ အင်အားကောင်းသော ရာဟု ထူလ နှင့်- အလွန့် အလွန် အင်အားကောင်းသော အင်္ဂါ အန္တရ ဒဿာ ကာလတွင်- ဇာတာရှင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အထင်ရှားဆုံး လူသား ဖြစ်သော အမေရိကန် သမ္မတ ဘ၀ ကို ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ (သို့သော်လည်း- ရာဟု ရော အင်္ဂါပါ- သဘာဝ ပါပဂြိုဟ်တို့ ဖြစ်၍- ၄င်းတို့ ကာလတွင် ကောင်းစားမှု အနေအထားကို မြင်ရနိုင်၏။)
ဘရိဂု သျှတ္တရ ကျမ်း ၂၅-၂၈ အရ၊ ရာဟု သို့မဟုတ် ကိတ်သည် ဇာတာ၏ ၁၀-တန့်တွင် တည်ပါက-ဇာတာရှင်သည် မုဆိုးမ နှင့် အချစ်ရည်ငံတတ်ပြီး အိုးအိမ် စည်းစိမ်နွမ်းပါး တတ်သည်။ (ဇာတာရှင်သည် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ မဟုတ်သဖြင့် ဤအချက်မှာမူ လွဲနေ၏။) အကယ်၍ ရာဟု၊ ကိတ်ကို သောမဂြိုဟ်များက ဆက်သွယ်ထားပါက- ကောင်းသော အိမ်ယာတွင် နေထိုင်ရသည်။ ဇာတာရှင်သည် ကဗျာ စာပေတွင် စိတ်ဝင်စားတတ်သည်။ ဖလဒီပက ကျမ်းအဆိုအရ- ကိတ် သည် ၁၀-တန့်တွင် တည်ခြင်း ဖြစ်လျှင်- ဇာတာရှင်သည် သတ္တိကြောင့် နာမည်ကျော်လိမ့်မည်။ ကိတ် ဂြိုဟ် သည် ဖြစ်သော မေထုန် ရာသီ (၁၀-တန့် ဘာဝ) ဘာဝ တွင်တည်သည်။
န၀င်း စက် အားဖြင့် ကြာသပတေး ပိုင်သော မိန် န၀င်း ဖြစ်ကာ-ရာဟု ပိုင်သော အဒြ နက္ခတ် ကိုစီးနင်း ထားသည်။ မူလ အင်အား အနေဖြင့် 8% မျှသာ ရှိထားသည်။
သမ္မတ အဖြစ် ရောက်ရှိစဉ် အနေအထား။
ကောဇာဒဿာ ရာဟု ထူလ၊ အင်္ဂါ အန္တရ၊ စနေ ပြတန္တရ- ကာလ ဖြစ်သဖြင့်- သမားရိုးကျ လေ့လာသူ ပညာရှင် များအနေဖြင့် ဂြိုဟ်တို့၏ အင်အားကိုသာ ချိန်ဆ တွက်ချက်ခြင်း မပြုပဲ ဟောကြားခဲ့ပါမူ- မှားယွင်းနိုင်သော အနေအထား ဖြစ်၏။ အားလုံးသော ဒဿာ သခင်ဂြိုဟ်များသည်- အများစု လက်ခံထားကြသော ပါပ ဂြိုဟ်များ ဖြစ်နေ၏။ သို့သော်- အခြား တစ်ဘက်တွင်လည်း- အောင်မြင်မှုက တစ်ဘက်- အဆုံးသတ် ကိစ္စကလည်း တစ်ဘက် ဆိုသည်ကို နားလည် သင့်ပါ၏။ ဒဿာ ကာလတွင် အောင်မြင်မှုများ ပြသနေရုံမျှ နှင့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြည့်စုံစွာ သုံးသပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကောဇာ ဆိုသော- ထိုရက်ပိုင်း ကာလတွင် ကောင်းကင်ပြင်တွင် ရှိသော ဂြိုဟ်နှင့်- မူလ ဘွားဇာတာ မှ ဂြိုဟ်၊ ဘာဝများ ဆက်စပ် နေမှုတို့ကိုပါ လေ့လာရမည် ဖြစ်၏။
(ကောဇာ ဇာတာ ရာသီစက် အားဖြင့်) 20/01/1961 နေ့ - ကောဇာဂြိုဟ်များ မှ မူလဘွားဂြိုဟ်များ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု အားဖြင့်-
မူလ တနလာင်္ ဂြိုဟ် (H11 ၏ သခင်) အား ကောဇာ တနလာင်္ (H11 ၏ သခင်) မှ (99.4) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ ကြာသပတေး (H4 ၏ သခင်) မှ (98.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ သောကြာ (H2 ၏ သခင်) မှ (97.1) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၁၁-တန့် ဆိုသည်မှာ ဇာတာရှင်၏ ဂုဏ်ဒြဗ် မြင့်မားမှု ကို ဖေါ်ပြသော အဓိပ္ပါယ် ဆောင်သည်သာမက- စန်း ခေါ် တနင်္လာသည်- အများ၏ ထောက်ခံမှုကိုလည်း ဖေါ်ပြနေသည် ကို မြင်ရ၏။ တစ်ဖန်- မိမိလိုအပ်သော - တောင့်တသော ဘာဝသည် ၂-တန့် နှင့် ၂-တန့် သခင် ဖြစ်ကာ- ၄င်းသည် စန်းခေါ် တနင်္လာအား လွှမ်းမိုးခြင်းသည် ထပ်ဆင့် အကြောင်းပြု နေတော့၏။
မူလ အင်္ဂါ ဂြိုဟ်အား ကောဇာ ကြာသပတေး (H4 ၏ သခင်) မှ (99.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ အင်္ဂါသည် မူလကတည်းကပင် လွန်စွာ အားကောင်း သောဂြိုဟ် ဖြစ်ပြီး- ထပ်ဆင့် အင်အား ရရှိသွားခြင်းမှာ- သမ္မတ ဖြစ်လာရခြင်း နောက်တိုး အချက်တစ်ချက် ဖြစ်လာပြန်၏။
မူလ ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ်အား ကောဇာ ကြာသပတေး (H4 ၏ သခင်) မှ (86.3) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးသည် ဇာတာရှင် ကိုယ်တိုင်ကို ကိုယ်စားပြုသော လဂ်သခင် ဖြစ်၍- ၄င်းအား သဘာဝ သောမ နှင့် ကာရက သောမ ဖြစ်သော ကောဇာ ကြာသပတေး၏ လွှမ်းမိုးမှု သည်လည်း- အမြင့်မားဆုံး အခြေ အနေ သို့ ပို့ဆောင် ပေးနေပြန်ပါ၏။
မူလ စနေ ဂြိုဟ်အား ကောဇာ တနင်္ဂနွေ (H12 ၏ သခင်) မှ (-89.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ရန်သူကို ဖေါ်ပြသော ၆-တန့် သခင် စနေ အား - သောက ဗျာပါဒ ကို ဖေါ်ပြသည့် ၁၂-တန့် သခင်၏ လွှမ်းမိုးမှုသည်- အတိုက်အခံ၊ ရန်သူ တို့ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲစရာများကို ဖြစ်လာစေသော အနေအထား တစ်ရပ် ဖြစ်ပါ၏။
(ကောဇာ ဇာတာ ရာသီစက် အားဖြင့်) 20/01/1961 နေ့ - ကောဇာဂြိုဟ်များ မှ မူလဘွား ဘာဝ များ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု အားဖြင့်-
၁-တန့် (လဂ်) အလယ်မှတ်အား ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-99.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၄-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (82.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-99.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၆-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ တနလာင်္ (၁၁-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (69) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ သောကြာ (၂-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (61.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-99.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၈-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (82.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၁၀-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (82.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-99.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၁၂-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ တနလာင်္ (၁၁-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (69) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ ကြာသပတေး (၄-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (82.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ သောကြာ (၂-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (61.5) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
လုပ်ကြံခြင်း ခံရစဉ် အနေအထား။
ကောဇာဒဿာ ကြာသပတေး ထူလ၊ စနေ အန္တရ၊ စနေ ပြတန္တရ ကာလ ဖြစ်၏။
(ကောဇာ ဇာတာ ရာသီစက် အားဖြင့်) 22/11/1963 နေ့ - ကောဇာဂြိုဟ်များ မှ မူလဘွားဂြိုဟ်များ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု အားဖြင့်-
မူလ တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်အား ကောဇာ ဗုဒ္ဓဟူး (H1 ၏ သခင်) မှ (99.4) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဤအနေအထားသည် ဘ၀ တွင် အောင်မြင်မှုများ ရှိနေဆဲ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ဖေါ်ညွှန်းထား၏။
မူလ သောကြာ ဂြိုဟ်အား ကောဇာ အင်္ဂါ (H8 ၏ သခင်) မှ (-84.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ သောကြာ (H2 ၏ သခင်) မှ (77.7) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ အင်္ဂါသည် သွေးသံကို ရည်ညွှန်းသော ဂြိုဟ်ဖြစ်ကာ- ၄င်းသည် သေဆုံးခြင်းနှင့် ဆိုင်သော မရဏ ဘာဝ ၈-တန့် သခင် ဖြစ်နေ၏။ ထိုဂြိုဟ်ဆိုးသည် - သောကြာ ခေါ် မော်တော်ယဉ် နှင့် သောကြာမှ တာဝန် ယူထားသော ၂-တန့် ဘာဝ ကို ဤနေ့ ဤရက်တွင် ဖျက်ဆီး ထားခြင်းသည်- ကံဆိုး မိုးမှောင် ကျရခြင်း၏ အခြေအနေ တစ်ရပ် ဖြစ်၏။
မူလ ရာဟု ဂြိုဟ်အား ကောဇာ ရာဟု- မှ (-100) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ ကိတ်- (မှ -100) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ ဤအချက် တို့သည်ကား- မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်ဖြင့် သေဆုံး စေခြင်း အတွက် အဓိက အကျဆုံး အနေအထား တစ်ရပ်ဟုပင် ပြောရပါတော့မည်။ ရာဟုသည် မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသော- ဂြိုဟ်ဖြစ်၍- မူလ ရာဟုဂြိုဟ်အား- ဤနေ့တွင် ကောဇာ ရာဟုမှ လွှမ်းခြင်းဖြင့်- မထင်မှတ်သော ဒုက္ခရောက်ခြင်းကို ထပ်မံ ပုံပေါ်စေတော့၏။
မူလ ကိတ် ဂြိုဟ်အား ကောဇာ ရာဟု- မှ (-100) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ ကိတ်- (မှ -100) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
(ကောဇာ ဇာတာ ရာသီစက် အားဖြင့်) 22/11/1963 နေ့ - ကောဇာဂြိုဟ်များ မှ မူလဘွား ဘာဝ များ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု အားဖြင့်-
၂-တန့် ဘာဝ ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-67.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ (၆-တန့် ဘာဝ ဆိုသည်မှာ ရန်သူကို ရည်ညွှန်းသော ဘာဝ ဖြစ်သည်ကို ၀ါသနာရှင် ပညာရှင် အားလုံး သိပြီး ဖြစ်၏။)
၅-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-67.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၆-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-95.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၇-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-67.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၉-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-95.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ကောဇာ သောကြာ (၂-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (98.8) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ (သွေးသံ၊ အကြမ်းဘက်မှု နှင့် ဆိုင်သော အင်္ဂါသည် - သေဆုံးခြင်းကို ဖေါ်ဆောင်သော မရဏ သခင် အဖြစ်ဖြင့် ဒုက္ခပေးပုံမှာလည်း တိကျလှပါသည်။)
၁၀-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ အင်္ဂါ (၈-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-95.6) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
၁၁-တန့် ဘာဝ အလယ်မှတ်အား ကောဇာ စနေ (၆-တန့် ဘာဝ ၏ သခင်) မှ (-67.9) % ဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
ဘွားဇာတာ တွင် တွေ့ရသော ယောဂ ခေါ် ယုဂ်များ။
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန့်တွင်) ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။ ဂဇ ဆိုသည်မှာ ဆင်ကို ဆိုလို၍ ကေသရီသည် ခြင်္သေ့ကို ဆိုလိုသည်။ ဆင်နှင့် ခြင်္သေ့တို့သည် တောတောင် အလယ်တွင် လွန်စွာထင်ရှား၍ အခြားသော တိရစ္ဆာန်များ၏ ကြောက်ရွံ.လေးစားခြင်းကို ရရှိသကဲ့သို့ ၄င်းတို့သည် လူအများကို သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း၊ အကြံပေးတတ်ခြင်း၊ သြဇာ အာဏာကြီးမားခြင်း တို့တွင် ထင်ရှားသည်။ သေဆုံး ပြီးနောက် အချိန်ကြာမြင့်သော ကာလ အထိ ၄င်းတို့၏ အမည်မှာ ကြာရှည်စွာတည်တံ့သည်။ မှတ်ချက်၊ ဂဇကေသရီ ယုဂ်ကို တွေ့ရှိပါက ၄င်းကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ကမ္မဓရုမယုဂ် (Kemadruma Yoga) ၊ (တနင်္လာ၏ ဘေးဘယ်ညာ နှစ်ဘက်စလုံး တွင် တနင်္ဂနွေမှ လွဲ၍ မည်သည့်ဂြိုဟ်မှ မရှိသောယုဂ်) ပါမပါ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။ အကယ်၍ ကမ္မဓရုမ ယုဂ် ကို တွေ့ခဲ့ပါလျှင် လည်း ၄င်း၏ အဆိုးကို ပျက်ပြယ်၍ ကောင်းခြင်းကို ပြန်လည် ဖြစ်စေ တတ်သော ကာလပဓရုမယုဂ်၊ (Kalpadruma Yoga) (လဂ်မှ ကိန်းအိမ်တို့တွင် ဂြိုဟ်ရပ်တည်ခြင်း ယောဂ) ပါမပါ ကြည့်ရန်လိုပါသည်။
ကြာသပတေးသည် တနင်္လာမှ ၁၀-တန့်တွင် ရပ်တည် နေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ ဤအမျိုးအစား ဂဇ ကေသရီယောဂ ကိုရသူသည် အောင်မြင်သော ဘ၀တက်လမ်း ရှိမည်။ ထင်ရှားသော ရာထူးဂုဏ်ဒြဗ် နှင့် ကြွယ်ဝခြင်း ရှိမည်။ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားသည်။ ဘာသာရေး ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ ဇနီးသားသမီးများကို စွန့်လွှတ်ပြီး သီးသန့် နေရတတ်သည်။
တနင်္ဂနွေမှ အပ-ဖြစ်သော ဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္လာမှ ၁၂-တန့်တွင်ရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။ ဇာတာရှင်သည် မင်းကဲ့သို့ ရှိလိမ့်မည်။ ကျန်းမာ၍၊ ခင်မင် နှစ်လိုဘွယ် ကောင်းခြင်း၊ အမည်ကျော်ကြားခြင်း၊ စကားပြောကောင်းခြင်း၊ အစွမ်းပြနိုင်ခြင်း၊ မျိုးစုံသော စည်းစိမ် တို့ကို ရရှိ၍- ကြည့်ကောင်းသော ရုပ်ရည်ရှိကာ ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို ရမည် ဟု ဆိုထားသည်။
အနပ္ဖ ယောဂ (သျှာနီ)
စနေသည် တနင်္လာမှ ၁၂-တန့်တွင်ရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။ ဤအနေအထား ဖြစ်သော အနပ္ဖယောဂ ကို ရထားခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် များစွာသော မြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်း၊ တောတောင်၊ ခြံမြေ၊ တို့ နှင့် တကွ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လက်တံ ရှည်လျားခြင်း၊ မိမိ ပြောစကားကို မိမိ လိုက်နာတတ်ခြင်း၊ အခြားသူတို့ထံမှ ဥစ္စာကို ရရှိခြင်း၊ ကောက်ကျစ်သော မိန်းမ တို့နှင့် တွဲဘက် ဆုံစည်း ရတတ်ခြင်း နှင့် မသင့်တော်သော ကိစ္စတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိတတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
တနင်္လာမှ လွဲ၍ အခြားဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန့် တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။ ဤယောဂတွင် သောမဂြိုဟ် အနေအထား ကို ရရှိခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် စကားပြောဆိုရာတွင် ကန့်သတ်မှု မရှိခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနိုင်သော စွမ်းရည် ရှိခြင်း၊ သင်ကြား လေ့လာရာတွင် ထက်မြက်ခြင်း၊ အောင်မြင် ကျော်ကြားခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ စွမ်းအင် ပြည့်စုံခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ စွမ်းရည်ကို အစွမ်းကုန်သုံးတတ်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေသည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် အောက်ကို ငေးလျှောက်တတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
ဝေါသျှိ ယောဂ (မင်္ဂလ)
အင်္ဂါ သည် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှ ၁၂ တန့် တွင် ရပ်ခြင်းဖြင့်ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။ ဤယောဂ ကို ရခြင်းဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် မိခင်ကို ရန်လုပ်တတ်၍၊ အခြားသူများ အပေါ်တွင်မူ ကောင်းတတ်သည်။
တနင်္လာ မှ ၁၀-တန့်တွင် သဘာဝ သောမဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးရပ်တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂) ဤယောဂ ရထားသော ဇာတာရှင်အား အုပ်ချုပ်သူ အကြီးအကဲတို့မှ ချီးမြှောက်၍၊ ရုပ်ဝတ္ထု ချမ်းသာတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ လှူဒါန်းနိုင်ခြင်း၊ အများနှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်ခြင်း၊ ကူညီတတ်ခြင်း၊ တို့နှင့် ပြည့်စုံကာ ကာလရှည်ကြာစွာ အမည်ကျော်ကြားမည်ဟု ဆိုထားသည်။
၄-တန့်သခင်နှင့် ၉-တန့်သခင်တို့သည် တစ်ခုမှ တစ်ခုစီသို့ ကိန်းအိမ် (၁၊၄၊၇၊၁၀ တန့်တို့) တွင် တည်နေကြပြီး၊ လဂ်သခင်သည် အင်အား ကောင်းပါက ဤယောဂ ကိုရရှိသည်။ ရှေးကျမ်းများ၏ အဆိုအရ- ဤယောဂကို ရသူသည် မိမိမှန်သည်ကို ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်တတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်သည့် အတိုင်း လုပ်တတ်သည်။ သတ္တိရှိသည်။ အခြား သူများကို အမိန်.ပေးခိုင်းစေရသူ၊ ဖြစ်တတ်ပြီး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ အိုးအိမ် မြေယာ၊ ယာဉ်ရထား ပိုင်ဆိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်စေသော ယောဂ ဖြစ်သည်။
လဂ်သခင် သည် ဒုဌာနအိမ် (၆၊ဂ၊၁၂ တန့်) တစ်ခုခု တွင် တည်နေပါက ဤယောဂ ကိုရရှိသည်။(ဖလဒီပက-၆၊၅၈) ဤယောဂကို ရရှိခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အသက်တိုခြင်း၊ စရိုက်ဆိုးခြင်း၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေသည်။ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ရတတ်ခြင်း၊ ကောက်ကျစ်သူတို့၏ ပေါင်းသင်းမှုခံရတတ်ခြင်း တို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု လည်း ဆိုထားသည်။
၃-တန့်ဘာဝသခင် သည် ဒုဌာနအိမ် (၆၊ဂ၊၁၂ တန့်) တစ်ခုခု တွင် တည်နေပါက ဤယောဂ ကိုရရှိသည်။ (ဖလဒီပက-၆၊၆၀) ဤယောဂကို ရရှိခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် စိတ်ခံစားလွယ်တတ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။ ရန်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့တတ်သည်။ ညီအကို မောင်နှမများ ဒုက္ခတွေ့ တတ်သည်။ အရဲလွန်၍ ရိုင်းသည် ဆိုသော သဘောဖြင့် မသင့်တော်သည် တို့ကို လုပ်မိတတ်သည်။
လဂ်သခင်သည် အလွန်အင်အားကောင်းပြီး၊ ၉-တန့်သခင်သည် သူပိုင်သော ရာသီ၊ သူ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်၊ သူ၏ ဥုစ်ရာသီ တစ်ခုခုတွင် ဖြစ်နေပြီး၊ ကိန်းအိမ်တွင် တည်နေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ ဤယောဂကို ရခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် ကြည့်ကောင်း သော ရုပ်၊ ကောင်းမွန်သော စာရိတ္တ၊ နှင့် အလွန်ချမ်းသာပြီး၊ မြေယာ အမြောက် အများပိုင်ခြင်း၊ ပညာတတ်ခြင်း၊ နှင့် မင်းကဲ့သို့ တောက်ပခြင်း၊ လူအများ က သိရှိခြင်း၊ ဇနီးမယား သားသမီး တို့နှင့် ပြည့်စုံ ခြင်းကို ရသည်။
၄-တန့် အိမ်ရှင် သည် ၅-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၉-တန့်အိမ်ရှင်၊ တို့အနက်မှ တစ်ခုခုကို ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုခြင်း၊ တစ်ဖန် ၄င်းတို့ မှ လည်း ၄-တန့် အိမ်ရှင် အား အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်။ ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာ ပြီး မင်းနှင့်တူသော အဖြစ်ကို ရသည်ဟု ရှေးကျမ်းများက ဆိုထားသည်။
၇-တန့် သခင်နှင့် ၉-တန့်သခင် တို့ အပြန်အလှန် မြင်နေကြပါက ဤယောဂ ကိုရသည်။ ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာ ပြီး မင်းနှင့်တူသော အဖြစ်ကို ရသည်ဟု ရှေးကျမ်းများက ဆိုထားသည်။
၄-တန့်သို့မဟုတ် ၁၀-တန့် အိမ်ရှင် နှင့် ၅-တန့်၊ ၉-တန့်အိမ်ရှင်၊ တို့ ပူးကပ်စွာ ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်ဟု ဗြို.ဟစ်ဇာတက ပရာသရ ဟောရသျှတ္တရ ကျမ်းတွင် ပြဆိုထားပြန်သည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၃၇) ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာ ပြီး မင်းနှင့်တူသော အဖြစ်ကို ရသည်ဟု ရှေးကျမ်းများက ဆိုထားသည်။
သောကြာသည် လဂ်တွင် တည်လျှက်၊ တနင်္လာ (သို့မဟုတ်) ကြာသပတေး၏ အမြင်၊ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ် မှု ဖြစ်စေကို ရနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၁၁) ဤဇာတာရှင်သည် မြင့်မြတ်သော - တော်ဝင်မျိုးနွယ်တို့နှင့် ဆက်သွယ် နေထိုင်ရတတ်လျှက်- တော်ဝင် အသိအမှတ် ပြုခြင်း ခံရသူ ဖြစ်တတ်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
၀ိပရိတ သာရလ ရာဇယောဂ
ဖလဒိပက ကျမ်း၏ အဆိုအရ ၈-တန့်အိမ်ရှင်သည် ၆-တန့်သို့မဟုတ် ၈-တန့် သို့မဟုတ် ၁၂-တန့်တို့တွင် ရပ်တည်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်ဟု ဖြစ်သည်။ (ဖလဒီပက ၆၊၆၅) ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အတတ်ပညာ တတ်မြောက်ခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း၊ ရန်သူအား အနိုင်ရရှိခြင်း၊ အောင်မြင် ကျော်ကြား စူပါစတား အဖြစ်ကို ရမည် ဟု ပြဆိုထားသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ် ရပ်တည်သော န၀င်းရာသီပိုင် အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန့်များတွင် ဖြစ်စေ၊ များတွင် ဖြစ်စေ၊ တြိကုန်း အိမ်များဖြစ်သော (၁၊၅၊၉) အတန့်များတွင် ဖြစ်စေ ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၂၈) ဤရာဇ ယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် သြဇာအာဏာ ကြီးမားခြင်း၊ မင်းအစိုးရ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကဲ့ သို့ အာဏာရှိခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုထားသည်။
ကြာသပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ (သို့မဟုတ်) တနင်္လာ တို့သည် ၉-တန့်တွင် တည်ကာ မိတ်ဂြိုဟ်များက မြင်ခြင်း ကို ခံထားရလျှက်- နေလောင် ခံရခြင်းလည်း မရှိပါက- ဤယောဂ ကိုရသည်။ (မူလကျမ်းရင်းကို မသိရပါ။) ဤဇာတာရှင်သည် လွန်စွာကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သော လူသား သို့မဟုတ် အများ၏ ကြည်ညိုခြင်း ခံရသော အုပ်ချုပ်သူဖြစ်မည် ဟု ဆိုထားသည်။
လဂ်သခင်သည် ၂-တန့်၊ ၅-တန့်၊ ၉-တန့်၊ ၁၁-တန့် အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ ဤယောဂကို ရပါက-ဇာတာရှင်သည် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လိမ့်မည်။
၂-တန့် သခင်သည် သည် လဂ်သခင်မှ ကိန်းအိမ် (၁၊၄။၇၊၁၀ အတန့်များ) သို့မဟုတ် တြိဂုဏ်းအိမ် (၁၊၅၊၉ အတန့်များ) တွင် ရပ်တည်ပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္တ စိန္တာမဏိ ၃) ဤယောဂကို ရထားပါက-ဇာတာရှင်သည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှု ဖြင့် ကြွယ်ဝခြင်း ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
၇-တန့်သခင် သို့မဟုတ် သောကြာသည် ကြာသပတေး သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဟူးတို့၏ ပူးခြင်း မြင်ခြင်းကို ခံနေရပါကဤယုဂ်ကို ရသည်။ ဇာတာရှင်၏ အိမ်ထောင်ဘက်သည် မြင့်မြတ်သော၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းသောသူ ဖြစ်မည်ဟုဆိုသည်။
ယုက္ကတိ သာမ ၀ိသာဝဂ္ဂမိ ယောဂ
၂-တန့်သခင်သည် သောမဂြိုဟ်နှင့် ပူးလျှက်၊ ကိန်း(သို့မဟုတ်) တြိကုန်း အိမ်တွင် တည်သော် (သို့မဟုတ်) ဥုစ်ရနေလျှက် ကြာသပတေးနှင့် ပူးသော် ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထစိဏ္တာမဏိ ၃၊၂၉) ဇာတာရှင်သည် ပါရမီရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ စကားပြော ကျွမ်းကျင်မည် ဟု ဆိုထားသည်။
၅-တန့်နှင့် ၈-တန့် ဘာဝတို့ သည် ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံထားရ နေခိုက် ၈-တန့်သခင် အားလည်း ဂြိုဟ်ဆိုးများ က ထိုးနှက်ထားပါက ဤယုဂ် ကို ရသည်။ အသက်တိုစေသော ယုဂ် ဖြစ်သည်။
၃-တန့်သခင်နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်တို့သည် နေရောင်သင့်နေပြီး၊ ပါပဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်မိုးကို ခံနေရလျှင် ဤယုဂ်ကိုရသည်။ ဇာတာရှင်သည် အသက်တိုပြီး အသက် ၃၂-နှစ် အထိသာနေရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
၈-တန့်သခင်နှင့် စနေဂြိုဟ်တို့သည် နေရောင်သင့်နေပြီး၊ ပါပဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်မိုးကို ခံနေရလျှင် ဇာတာရှင်သည် အသက်တိုပြီ်း အသက် ၃၂-နှစ် အထိသာနေရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
လဂ်မှ နေ၍ ၁၀-တန့် သခင်သည် အတ္တမာ ကာရက သခင် နှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အတ္တမာ ကာရက ကိုယ်တိုင် နှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း ရှိနေလျှင်သော်လည်းကောင်း ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း ၄၂၊၁) ဤဇာတာရှင်သည် မင်းအတိုင်ပင် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ဆိုထားသည်။
ဗေဒင်သည် အမြဲမှန် နေပါသလား။
ဖြစ်ရပ် အားလုံးတို့တွင်- ကာလ ဒေသ၊ ပယောဂ ဆိုသော အနေအထား အားလုံးတို့ နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမှသာ ထိုဖြစ်ရပ်သည် အကောင်အထည် ပေါ်၏။
ဥပမာ- မီးလောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားရန် အတွက်-
မီးလောင် စေတတ်သော- မီးလောင်လွယ်သော ပစ္စည်းများ ရှိထားခြင်း။
မီးလောင်လာသော အခြေအနေကို ပျက်ပြားစေသည့် မိုးရွာသွန်းမှု ကင်းမဲ့နေချိန် ဖြစ်ခြင်း။ စိုစွတ်သော အနေအထား မဟုတ်ပဲ၊ သွေ့ခြောက် သော အခြေ အနေတွင်- ပတ်ဝန်းကျင် ကာလ ဖြစ်နေခြင်း၊
မီးလောင်ဖြစ်စေသော ပေါ့လျော့မှု၊ သို့တည်းမဟုတ် မီးလောင်စေရန် လုပ်ဆောင်သော အားထုတ်မှု ပယောဂ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခြင်း။
ဆင့်ကဲ- ဆင့်ကဲ ဖြစ်လာမှုတို့ကို အရှိန်မီ ဟန့်မတား နိုင်သော အနေအထားတွင် ရှိခြင်း
စသည်တို့ - စုံညီစွာ ရှိနေမှသာ ထင်ရှားသော မီးလောင်မှု ဖြစ်မည် ဖြစ်၏။
ဗေဒင်သည်- အကြောင်းတရားကို ရှာသော ပညာဖြစ်၏။ အတွေးအခေါ် နှင့် ဆိုင်သော ၀ိဇ္ဖာ ပညာ ဖြစ်၏။ ဒီဂြိုဟ် နှင့် ဒီဂြိုဟ် ပူးယင်- ဒါဖြစ်၊ ဟိုဂြိုဟ်နှင့် ဟိုဂြိုဟ် ပူးယင် ဟိုဟာဖြစ် ဟု၍- မူလ အကြောင်းတရား တို့ကို လျစ်လျူရှု၍- ပုံသေ ဟောပြောကြမည် ဆိုသော်- ပညာနှင့် ဝေးသွားနိုင်ပါသည် ဟု အကြံပြုယင်း ကနေဒီ ဆောင်းပါးကို နိဂုံး ချုပ်လိုက်ပါသည်။
မမြင်နိုင်သော လက်ပိုင်ရှင် များနှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဂျွန်ဖက်ဖ် ကနေဒီ (၂)
ကနေဒီ လက်မခံ ခဲ့သော ယုတ်မာသည့် အကွက်ချမှု တစ်ခု။ (သို့မဟုတ်) Operation Northwoods
ပြီးခဲ့သော အပိုင်း (၁) တွင် - မမြင်ရသော လက်တို့၊ ကနေဒီ ၏ လုပ်ဆောင်ခဲ့ မှု တို့နှင့် မီဒီယာ တို့၏ အကြောင်းကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အယ်လ် ပါချီနို သရုပ်ဆောင် ထားသော The Recruit (2003) ရုပ်ရှင်ကားမှ- စကားပြော ဒိုင်ယာလော့ဂ် တစ်ခု ကို မှတ်မိပါသည်။
သူပြောသည့် စကားမှာ- “ငါတို့ လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ- မအောင်မြင်တာတွေကိုသာ လူတွေ သိတာ၊ အောင်မြင်သွားတာတွေကို လူတွေ မသိကြဘူး” ဟု ဖြစ်ပါ၏။
ဤစကားသည် အမှန်ပင် ဖြစ်၏။
ယခု Operation Northwoods သည် - သမ္မတ ကနေဒီမှ လက်မခံသဖြင့်- ပေါက်ကြားသွားပြီး- ပျက်ပြယ်သွားရသည့် အကွက်ချ လုပ်ကြံမှု ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း၊ အောင်မြင်သွားသည့် များစွာသော ဖြစ်ရပ်များတွင်မူ- ယခု ကိစ္စမှာကဲ့သို့- အများစုက- သောနုတ္ထိုရ် ၏ မြှားချက်ကို မမြင်သိကြ ရပါချေ။
လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားသော ဖြစ်ရပ် အချို့တွင် - မသင်္ကာ ဖြစ်သူ အချို့က- အထောက်အထား အချို့ဖြင့် ဖေါ်ပြလာသော အခါတွင်- လှပသော တုန့်ပြန်မှု တစ်ခု အနေဖြင့်- Disinformation ခေါ်- မှန်နေသော စွပ်စွဲချက်နှင့်- အပေါ်ယံ ဆင်တူသော်လည်း- အများ မယုံနိုင်သည့်- တစ်နည်းအားဖြင့်- ယုတ္တိကင်းမဲ့သော စွပ်စွဲချက် များစွာကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း လိုလို- ဖြန့်လိုက်ခြင်းဖြင့်- မူလ အမှန်ဖြစ်သော- ကိစ္စပါ ပျက်ပြယ်သွား စေသော- (၄င်းတို့၏ အဆိုအရ- ရေထိုးခြင်း Dilution) ဆိုသော နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုတတ် ကြသည် ဖြစ်ရာ- သာမာန်လူများ အနေဖြင့်- မူလ စွပ်စွဲချက် အမှန်ကိုပါ တန်ဘိုးထားမှု ကင်းမဲ့သွားစေပါတော့သည်။
ယခု တင်ပြသည့် Operation Northwoods သည် - ယုံထင် ကြောင်ထင် စွပ်စွဲထားသည့် စွပ်စွဲချက်မျိုး မဟုတ်ပဲ- ဖြောင့်မတ်သော သမ္မတ ၏ မထောက်ခံ မှုကြောင့်- ကျူးဘားအား ၀င်ရောက် ကျူးကျော်ရန် အစီအစဉ် ပျက်သွားရပုံကို- John F. Kennedy Assassination Records Review Board မှ ၁၉၉၇-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈-ရက်တွင် အများပြည်သူတို့ တရားဝင် ချပြလိုက်ရသော- စာမျက်နှာ စုစုပေါင်း ၁၅၂၁-မျက်နှာ ရှိ- အကွက်ချ ခဲ့သည့် ကောက်ကျစ်သော အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းအား- Joint Chiefs of Staff ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လမ်နစ်ဇာ Lemnitzer မှ မူကြမ်းရေးဆွဲ ခဲ့ပြီး- ကာကွယ်ရေး ဌာန သို့ ဆက်လက် တင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မတ ကနေဒီ၏ ပယ်ချ ခဲ့မှုကြောင့်- ၄င်းအစီအစဉ် များကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခွင့်မရခဲ့ပါချေ။
စိတ်ဝင်စားသူများ ရှိပါက- အချို့သော စာမျက်နှာများကို ဂျော့ ၀ါရှင်တန် ယူနီဗာစီတီ The George Washington University ဆိုက် http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010430/doc1.pdf မှ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါသည်။
Operation Northwoods ကို ၁၉၆၂- ကနေဒီ လုပ်ကြံခြင်း မခံရမီ တစ်နှစ် ကာလတွင် အဆိုပြုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။ ၄င်း အဆိုတွင် စီအိုင်အေ (သို့မဟုတ်) ၄င်းမှ ငှားရမ်းထားသော၊ အဆင့်ဆင့် လက်ခွဲများ အနေဖြင့်- ကျူးဘား နိုင်ငံမှ စေလွှတ်သော အဖျက်သမား အေးဂျင့် များ အသွင်ဆောင်ကာ- အမေရိကန် နိုင်ငံနှင့် အခြား နေရာ အချို့တွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ နေရာတို့တွင်- အကြမ်းဘက်မှုများ terrorism ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်ပြီး - ၄င်းတို့ကို ကျူးဘား သမ္မတ ဖြစ်လာသော ဖီဒယ်လ် ကက်စထရို အား စွပ်စွဲပြီး- ကျူးဘားကို ၀င်ရောက် ကျူးကျော် ရန် ဖြစ်သည်။
၄င်းတို့တွင်- ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ဗုံးဖေါက်ခွဲများ ပါဝင်၍- လိုအပ်သော သက်သေ အတုများကိုလည်း ပြင်ဆင်ထားရန် ဖြစ်သည်။
ထိုအဆိုပြုချက်တွင် ပါဝင်သော စာသား တစ်ခုမှာလည်း-
"ဤအစီအစဉ်၏ လိုလားသော ရလဒ်မှာ- အမေရိကန် နိုင်ငံ အနေဖြင့်- ခုခံရေး အတွက် နှစ်မြို့စရာ မရှိသည့် အနေအထားကို ခံစားနေရပြီး၊ ကမ္ဘာ့အနောက်ပိုင်း ဒေသ ၏ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ကျူးဘားသည် ခြိမ်းခြောက်မှု ပြုနေကြောင်း- တကမ္ဘာလုံးမှ ထင်မြင် လာစေရန် ဖြစ်သည်။" ဟု ပါဝင်သည်။ "The desired resultant from the execution of this plan would be to place the United States in the apparent position of suffering defensible grievances fromarash and irresponsible government of Cuba and to develop an international image ofaCuban threat to peace in the Western Hemisphere."
ဆက်လက် လေ့လာလိုသူများ ဤနေရာတွင်လည်း လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods)
၄င်းတွင် အောက်ပါ တို့ ပါဝင်သည်-
ရန်လိုသော ကျူးဘား တပ်ဖွဲ့များမှ- ဂွမ်တာနာမို Guantanamo ပတ်ဝန်းကျင်တွင် - အောက်ပါ လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်သည့် အသွင် ဖန်တီးရန်။
- မိမိတို့၏ လျှို့ဝှက် ရေဒီယို များမှ ကောလဟဠ များ လွှင့်ရန်။
- ကျူးဘား ယူနီဖေါင်း ၀တ်ထားသူများမှ ခံတပ်သို့ -တိုက်ခိုက်မှု များ ပြုလုပ်ရန်။
- ကျူးဘား အကြမ်းသမား ဟု ၀န်ခံသည့် မိမိတို့ စေခိုင်းထားသူများကို ဖမ်းဆီးပြရန်။
- မငြိမ်သက်မှု အထိကရုဏ်းများကို မိမိလူများမှ- ခံတပ်များ အနီးတွင် ဖန်တီးရန်။
- မိမိတို့ ခံတပ်ရှိ လက်နက် ဂိုဒေါင်ကို ဖေါက်ခွဲရန် - လေတပ် စခန်း မှ လေယာဉ် အချို့ကို မီးရှို့ပစ်ရန်။
- အမေရိကန် စခမ်းသို့ - မော်တာ အမြောက်ကျည်များ ကျရောက်စေရန်။ ပျက်စီး မှုများ ရှိစေရမည်။
- ဂွမ်တာနာမို Guantanamo မြို့သို့ ပင်လယ်မှ ချဉ်းကပ်လာသော - အဖျက်သမား အဖွဲ့ ဆိုသူများကို ဖမ်းပြရန်။
- စခမ်းတွင်- လာရောက် အန္တရယ်ပြုသော စစ်ပျောက်ကြား ဆိုသူ တို့ကို ဖမ်းပြရန်။
- ဆိပ်ကမ်းရှိ သင်္ဘော တို့ကို ဖျက်ဆီးပြရန်။ ကြီးမားသော မီးလောင်မှု ဖြစ်ရန် အတွက်- naphthalene ကို အသုံးပြုရန်။
- မိမိတို့ တွင် သေဆုံးမှု အချို့ရှိသည် ဆိုပြီး- အသုဘ အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ရန်။
ကြားသိသူတိုင်း မမေ့နိုင်ဘွယ် ဖြစ်ရပ်များကို အောက်ပါ ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်။
အမေရိကန် သင်္ဘောကို ဂွမ်တာနာမို တွင် ဖေါက်ခွဲ၍- ကျူးဘား အား အပစ်တင်ရန်။
လူမဲ့ ရေယာဉ် တစ်စီးကို ကျူးဘားမှ လှမ်းမြင် နိုင်သော ဟာဗားနား (သို့မဟုတ်) ဆန်တီယာဂို အနားတွင် ဖေါက်ခွဲ၍- ကျူးဘား၊ လေယာဉ် နှင့် သင်္ဘောများ လာရောက် စစ်ဆေးသည်ကို -ကျူးဘားတို့မှ လုပ်ဆောင်သည့် အနေဖြင့် သက်သေ ရအောင် လုပ်ယူ၇န်။ တကယ်တမ်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လိုက်ပါခြင်း မရှိသော သင်္ဘောပါ ၀န်ထမ်းများအား အရေးပေါ် ကယ်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်။ သေဆုံးသူ စာရင်များကို အမေရိကန် သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြရန်။ အစရှိသည် တို့ ပါဝင်၍- နောက်ပိုင်း အစီအစဉ်များ- ကျူးဘား တို့၏ တုန့်ပြန်မှု အပေါ် အသုံးချ၍- ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ-လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်ဆင့် များ၊ ရန်စ သော အစီအစဉ် များစွာ တို့ ဖြစ်သည်။
လွန်စွာ များပြားလှသဖြင့်- အသေးစိတ် မဖေါ်ပြနိုင်တော့ပါ။
ဤအစီအစဉ် တို့သည်- ကျူးဘား နိုင်ငံကို ကျူးကျော် ရန် ဖြစ်သော်လည်း- တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပေါ်ပေါက်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်၏။
သို့သော်- ကနေဒီ သမ္မတ ဖြစ်ချိန် နှင့် ကြုံကြိုက်ခြင်း တို့ကြောင့် ထိုအစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်ခွင့် မရသော အနေအထားသို့ ရောက်သွားခဲ့ရပါ၏။
ကုလ သမဂ္ဂတွင်လည်း- ဦးသန့် အနေဖြင့် ၁၉၆၁-နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍- အတွင်းရေးမှုးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူချိန် နှင့် တိုက်ဆိုင် နေခြင်း တို့သည်- တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ကိစ္စအား ဖြစ်ပေါ်ခွင့် မရှိစေခြင်း အကြောင်း တစ်ရပ်ဟု ဆိုရပါမည်။
အမှန်အားဖြင့် ဆိုသော်- Operation Northwoods သည် တစ်ဘက်သူအား စွပ်စွဲရန် အကွက်ချသော နည်းမျှသာ ဖြစ်၍- အခြားသော နည်းများ အနက်မှ အချို့ မှာမူ- တစ်ဘက်သူ အား တိုက်ရိုက် ရန်ပြု သော အနေအထား မပြုသော်လည်း- ထိုသူ၏ ထွက်လမ်းပိတ် စေကာ- မိမိအား ပြောင်ကျကျ တိုက်ခိုက် လာခြင်းမှတစ်ပါး အခြားနည်း မရှိသော အခြေ အနေသို့ ရောက်လာအောင် အဆင့်ဆင့် တွန်းပို့ အားဖြင့် အားလုံး၏ အမြင်တွင် တစ်ဘက်သူသည်သာ လွန်ကျွံသည့် အနေအထားဖြစ်၍- မိမိက မလွှဲသာသဖြင့်၊ တုန့်ပြန်ရသည် ဆိုသည့် အသွင် ဆောင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်စေသည့် နည်းစနစ်များစွာ လည်း ရှိနေပါသေး၏။ အောင်မြင်မှုများလည်း ရခဲ့သည်သာ ဖြစ်၏။
ဤဆောင်းပါး ရေးရာတွင်- စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့်- မည်သည့် နိုင်ငံ၊ မည်သည့် အစိုးရ၊ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် စသော ပုဂ္ဂလ ဓိဋ္ဌာန် - အစွဲမျိုးဖြင့် နားလည်သွားခြင်း၊ မဖြစ်စေလိုပါ။
အကယ်၍- တစ်စုံ တစ်ယောက် အနေဖြင့် - ဤအကြောင်းတို့ကို ဖတ်ပြီး- “မည်သည့် နိုင်ငံ က ဒီလို၊ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းက ဒီလို” ဟု မြင်ယောင် နားလည်သွားသည် ဆိုပါအံ့- ကျွန်တော်၏ တင်ပြ ပုံ ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်- သောနုတ္ထိုရ် လက်မှ လွှတ်လိုက်သော မြှားကို အမုန်းပွားမိခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အပိုင်း (၃) ဆက်လက် ဖေါ်ပြပါမည်။